Lalàna ambany, olona ambony | NewsMada
Hafa raha samy hafa amin’ireo firenena maneran-tany i Madagasikara. Kanto, eo amin’ny zavaboahary eo aminy. Anisan’ny mampiavaka ary tsy misy afa-tsy eto amin’ny firenena Malagasy ny Madagasikara. Be mpitsiriritra ihany koa ny hatsaran’ny morontsiraka, hany ka mahatamana ireo vahiny mpizahantany.
Mbola iavahan’ity Nosy mena ity amin’ny hafa ihany koa ny fitsipi-pifehezana ao aminy. Ny lalàna mantsy dia ambany fa ny olona no ambony. Samy manao izay mahametimety azy ny mpitondra amin’io lalàna ifampifehezana io. Any amin’ny firenen-dehibe efa anjakan’ny demokrasia sy ny liberalisma, voafehin’ny lalàna avokoa ny rehetra. Fototra iaingan’ny fandrosoana ny fanajana ny lalàna, no.
Hafakely kosa ny eto Madagasikara, izay dradradradraina fa tany tan-dalàna. Samy manana ny hamaritany sy andikany ny lalàna avokoa na ny mpitondra na ny mpanohitra, eny hatramin’ny vahoaka. Lalàna ambany, olona ambony.
Tsy misy manaiky ambanin’ny lalàna izany. Ny mpitantana, mametraka lalàna rehefa metimety aminy, fa manala izany, amin’ny fotoana mamatotra azy. Toy ny olona tsy maty manota, satria ny lalàna ambany, ny olona ambony.
Etsy ankilany, miezaka harovan’ny lalàna sy hanara-dalàna ary ho arofanina ireo tsy eo amin’ny fitondrana, saingy mamadika izany ho an’ny tombontsoany ihany koa. Dia ny lalàna ambany, ny olona ambony.
Rehefa samy tsy manara-dalàna, voatery miantso mpitsara iraisam-pirenena. Eo koa anefa dia samy miseho ho mahafantatra ny momba izany ka tsy misy manaiky ho resy satria ny lalàna ambany, ny olona ambony. Dia zendana ny vazantany efatra amin’ity firenena miavaka ity. Tsara ivelany, saingy mamohehitra ny anatiny. Tsy hita mandroso, tsy hay hoe mihemotra, satria ny lalàna ambany, ny olona ambony.